ဒူဒူကြီး: Gate Valves
Valve တွေဟာ ထုတ်လုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ industrial standard ပေါါမူတည်ပြီး၊ face to face ဆိုတဲ့ flange တဖက်မှ၊ တဖက် အကွာအဝေး၊ flange PCD (pitch circle diameter), flange OD (over all diameter) အစရှိတဲ့ အတိုင်းအတာ တွေ ကွာခြားတတ်သလို၊ valve ရဲ့အမြင့် လည်းကွာခြားတတ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် industrial standard တခုတည်း ဖြစ်ပေ မယ့် အသုံးပြုမယ့် media ရဲ့ pressure ပေါါမူတည်လို့၊ face to face ဆိုတဲ့ flange တဖက်မှ၊ တဖက်အကွာအဝေး၊ flange PCD, flange OD အစရှိတဲ့ အတိုင်း အတာတွေ ကွာခြားပါတယ်။
သဘေ်ာပေါါမှာတွေ့ရမယ့် valve တွေရဲ့ Industrial standards တွေကတော့ JIS, ASTM, ANSI, BS, DIN အစရှိ တဲ့ standard တွေဖြစ်ပါတယ်။ valve body တွေကိုကြည့်ရင်၊ အတိုကောက် သက်ေတတွေနဲ့ industrial standard, material, pressure အစရှိတာတွေ ကို၊ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ international material symbol code တွေကို၊ မှတ်သားမိသလောက်ဖော်ပြပါ့မယ်။
SS 41, SS 50 = rolled steel for general structure,
SF 45 = carbon steel forgings for general use,
S 15C, SS 25C, SS 35C = carbon steel for machine structure,
SUS 403, SUS 420J1, SUS 420 J2 = stainless steel bar
SUS 304 = cold rolled stainless steel sheets and plates
SC 46, SC, 49 = carbon steel castings, SCS2= stainless steel casting
FC 20 = gray iron casting, C2 600P, C 2801P = copper and copper-alloy sheets, plates, strips and coiled sheets
C 3771BD, C 3771BE, C 6782BD, C 6782 BE = copper and copper-alloy rods and bars
C 2600W, C 2700W = copper and copper alloy wire, BC6= bronze casting
international material symbol code တွေအရ၊ valve body မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုကောက် သက်ေတတွေကို၊ ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ valve casing ဟာ carbon steel casting, stainless steel casting, gray iron casting, bronze casting အစရှိသလို အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1/8 inch =6mm, 1/4 inch = 8 mm, 3/8 inch = 10 mm, 1/2 inch = 15 mm,
3/4 inch = 20 mm, 1 inch = 25 mm,
1 1/4 inch = 32 mm, 1 1/2 inch = 40 mm,2inch = 50 mm
2 1/2 inch = 65 mm,3inch = 80 mm,4 inch = 100 mm
6 inch = 150 mm, 8 inch = 200 mm, 10 inch = 250 mm
12 inch = 300 mm, 14 inch = 350 mm, 16 inch = 400 mm
18 inch = 450 mm, 20 inch = 500 mm, 22 inch = 550 mm
24 inch = 600 mm, 26 inch = 650 mm, 28 inch = 700 mm
30 inch = 750 mm, 32 inch = 800 mm, 36 inch = 900 mm
တခါ valve ရဲ့ အရွယ်အစား size ကို လက်မ၊ သို့မဟုတ် မီလီမီတာနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ valve ရဲ့ အရွယ် အစားဟာ၊ valve နဲ့ ဆက်သွယ်မယ့် pipe ရဲ့ nominal diameter လို့လည်းအလွယ်တကူပြောနိုင်ပါတယ်။ အပေါါမှာ nominal diameter နဲ့ပက်သက်တဲ့ လက်မနဲ့ မီလီမီတာဆက်သွယ်ချက် ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမယ့် flow media ရဲ့ pressure ကိုလည်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုအပ်သလို valve body မှာ အတိုကောက် သက်ေတတွေနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
steam piping နဲ့ boiler circulating water piping တွေအတွက်၊ အသုံးပြုတဲ့ valve တွေကတော့ globe valves တွေနဲ့ angles valve တွေဖြစ်ပါတယ်။
nominal diameter 15 ~ 40 mm တနည်းအားဖြင့် လက်မဝက်နဲ့ တလက်မခွဲ အရွယ်အစားရှိတဲ့ globe valves တွေနဲ့ angle valves တွေရဲ့ maximum working pressure ဟာ၊ maximum working temperature 205 deg. C မှာ၊ 1. 57 MPa သို့မဟုတ် 16 Kgf/ cm2 ခန့်ရှိရမှာဖြစ် ပါတယ်။ အလားတူ nominal diameter 15 ~ 40 mm အရွယ်အစားရှိတဲ့ globe valves တွေနဲ့ angle valves တွေကို maximum working temperature 400 deg. C ခန့်မှာအသုံးပြုမယ် ဆိုရင် maximum working pressure ဟာ၊ 30. 04 MPa သို့မဟုတ် 31 Kgf/ cm2 ခန့် ရှိရမှာဖြစ်ပြီး၊ 425 deg. C ဆိုရင်တော့ 5. 59 MPa သို့မဟုတ် 57 Kgf/ cm2 ခန့်ရှိရမှာမှာဖြစ်ပါတယ်။
သဘေ်ာပေါါမှာတွေ့ရမယ့် valve တွေရဲ့ JIS, ASTM, ANSI, BS, DIN အစရှိတဲ့ Industrial standard တွေထဲက၊ JIS standard ကို ကိုးကားဖော် ပြပါ့မယ်။
JIS Japan Industrial Standard အရ ထုတ်လုပ်တဲ့ valve တွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ၊ nominal diameter 50 ~ 200 mm အရွယ် steam piping နဲ့ boiler water circulating piping system တွေ အတွက်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုမယ့် globe valves တွေနဲ့ angles valves တွေဟာ၊ max. working temperature 205 deg. C မှာ၊ 0.49 MPa (5 Kgf/ cm2), 0.98 Mpa (10 Kgf/ cm2), 1.57 Mpa (16 Kgf/ cm2) maximum working pressure ရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားသလို၊ 300 deg. C မှာ 1.18 Mpa (12 Kgf/ cm2), 400 deg. C မှာ 3.04 MPa (31 Kgf/ cm2), 425 deg. C မှာ 4.22 Mpa (43 Kgf/ cm2) နဲ့ 5.59 Mpa (57 Kgf/ cm2) ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထား တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
steam piping နဲ့ boiler water circulating piping system ဟာ၊ nominal diameter 250~ 400 mm အရွယ်အစား ရှိရင်တော့၊ 100 deg C မှာ၊ 0.49 MPa (5 Kgf/ cm2) max. pressure ခံနိုင်တဲ့၊ globe valves တွေနဲ့ angles valves တွေကိုတတ်ဆင်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားသလို၊ 300 deg. C အတွက် 1. 18 Mpa (12 Kgf/ cm2) နဲ့ 400 deg. C အတွက် 3.04 MPa (31 Kgf/ cm2) max. pressure ခံနိုင်တဲ့၊ globe valves တွေနဲ့ angles valves တွေကို တတ်ဆင်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
feed water piping system မှ general non-shock sea water, bilge & ballast sea water piping တွေအတွက်၊ အသုံးပြုမယ့် globe valves တွေနဲ့ angles valves တွေကိုတော့၊ piping ရဲ့ nominal diameter ပေါါမူတည်လို့ရွေးချယ်တတ်ဆင်ပါတယ်။ အဲဒီ valve တွေကိုလေ့လာ ကြည့်တဲ့အခါ၊ max. pressure အနေနဲ့ 0.49 MPa (5 Kgf/ cm2) နဲ့ 0.98 MPa ( 10 Kgf/ cm2) ရှိတဲ့၊့  globe valves တွေနဲ့ angles valves တွေ ကို တတ်ဆင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
gate valves တွေနဲ့ swing check valves တွေကိုလည်း၊ 120 deg. C အောက်၊ feed water piping system မှ general non-shock sea water, bilge & ballast sea water piping system တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ သဘေ်ာမှာတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ gate valves တွေနဲ့ swing check valves တွေရဲ့၊ max. pressure ကတော့၊ 0.49 MPa (5 Kgf/ cm2) နဲ့ 0.98 MPa ( 10 Kgf/ cm2) ခန့်ရှိပါတယ်။
pulsating water piping, fuel oil piping, lubricating oil piping တို့မှာ၊ globe valve, gate valve တွေနဲ့ swing check valve တွေကို တတ်ဆင် အသုံးပြုပြီး၊ tanker တွေရဲ့ cargo piping system မှာ တော့ gate valve တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ flow media ရဲ့ pressure ပေါါမူတည်ပြီး၊ 0.49 MPa (5 Kgf/ cm2) နဲ့ 0.98 MPa ( 10 Kgf/ cm2) pressure ရှိတဲ့၊ globe valve, gate valve တွေ နဲ့ swing check valve တွေကိုရွေးချယ် တတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။
compressed air system မှာ globe valve တွေနဲ့၊ angle valve တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုပြီး၊ main air piping system မှာတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ valve တွေဟာ၊ max. working pressure ဟာ 4.51 Mpa (46 Kgf/ cm2) ရှိပြီး၊ control air piping system မှာတော့ 0.98 MPa (10 Kgf/cm2) နဲ့ 1.57 Mpa (16 Kgf/ cm2) max. working pressure ရှိတဲ့၊ valve တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
valve တွေကိုတတ်ဆင်အသုံးးပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က flow ကို၊ control လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ valve တွေကို အုပ်စုခွဲကြည့်ရင် အခြေခံအားဖြင့် stop valve နဲ့ check valve ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ stop valve တွေ ဟာ valve stem ရဲ့ movement အရ၊ totally shut off သို့မဟုတ် partially shut off အစရှိသလို၊ flow ကို၊ control လုပ် ပါတယ်။ globe valve, gate valve, butterfly valve နဲ့ ball valve တွေကို၊ အဓိက stop valve တွေအဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင်သလို plug valve တွေနဲ့ needle valve တွေကိုလည်း၊ stop valve တွေ အဖြစ်၊ သတ်မှတ်နိုင် ပါတယ်။
globe valve, gate valve, butterfly valve, ball valve အစရှိသလို ကွဲပြားပေမယ့်၊ တကယ်တမ်း အလုပ်လုပ်ပုံ အရ ခွဲခြား ကြည့်ရင်၊ isolating valve, regulating valve နဲ့ control valve ဆိုပြီး (၃) မျိုးကိုသာတွေ့ရမှာဖြစ် ပါတယ်။
isolating valve တွေကို totally closed နဲ့ fully open function တွေအတွက်၊ အသုံးပြုပြီးပါတယ်။ regulating valve ကတော့ totally closed နဲ့ fully open function တွေကြားမှမည်သည့် function ကို မဆို ဆောင်ရွက်ပေး ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် flow ကို အလိုရှိသလို၊ control လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ valve အမျိုးအစားလို့ခေါါနိုင်ပါတယ်။ အလားတူ control valve တွေဟာ၊ flow ကို control လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ valve အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ hydraulic, pneumatic နဲ့ electric အစရှိတဲ့ power တခုခုကိုအသုံးချကာ၊ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးတာမို့ power operated valve တွေလို့၊ ခေါါပါတယ်။
Fig. Valve Stem Movement
တည်ဆောက်ပုံ နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ function တွေကွဲပြားပေမယ့်၊ valve stem ရဲ့ movement အရ၊ ခွဲခြား ကြည့်ရင် linear movement နဲ့ rotary movement ဆိုပြီး၊ (၂) မျိုးသာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ gate valve နဲ့ globe valve တွေဟာ၊ linear movement valve တွေဖြစ်ပြီး၊ ball valve နဲ့ butterfly valve တွေ ကတော့ rotary movement valve တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
Gate Valve ကို၊ oil, gas, air, slurries, heavy liquids, steam, non-condensing gases တွေနဲ့ corrosive liquids လို၊ flow media အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ gate valve တွေဟာ high capacity media flow တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ valve open position မှာ flow ကို အနှောက်အယှက် မပေးခြင်းနဲ့ valve close position မှာလည်း လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း၊ အစရှိတဲ့အားသာချက်တွေရှိသလို၊ flow media ကို control မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ valve cavitation မှာ flow pressure ကို လျှော့ကျစေတတ် ခြင်း နဲ့ throttling function အနေနဲ့ အသုံးမပြုနိုင်ခြင်း၊ အစရှိတဲ့ အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။
gate valve တလုံးမှာ၊ အဓိကပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်း (၄) မျိုးက body, bonnet or cover, gate နဲ့ valve stem တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ gate ဆိုတာ ကတော့၊ valve disc ကိုခေါါတာဖြစ်ပြီး၊ ပုံသဏ္တွန်အားဖြင့် wedge shaped disc ဖြစ်ပြီး၊ နဲ့တွဲကာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ အဲဒီ wedge shaped disc သို့မဟုတ် wedge shaped gate ကို၊ valve body မှ၊ wedge shaped seat ပေါါ ထိုင်စေခြင်းဖြင့်၊ valve ကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ flow အားရပ်တန့်စေပါတယ်။
valve stem ရဲ့ အပေါါဖက်မှာ၊ hand wheel ကိုတတ်ဆင်ထားပြီး၊ အောက်ဖက်မှာ wedge shaped disc ကိုတတ်ဆင်ထားတာမို့၊ hand wheel ကို လှည့်ပတ်ခြင်းကြောင့်၊ wedge shaped disc ဟာ၊ အထက်အောက်ရွေ့လျှားပါတယ်။ stop flow. flow ကို၊ စီးဆင်းစေဖို့နဲ့ ရပ်တန့်စေဖို့ တနည်းအားဖြင့် start နဲ့ stop ကိုသာ၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာမို့၊ normal gate valve တွေကို fully open or fully closed position တွေ အဖြစ်သာ အသုံးပြုကြပြီး၊ partially close or open သို့မဟုတ် throttling အနေနဲ့သုံးရင်၊ vibration ဖြစ်ပေါါတတ် ပါတယ်။
Fig. rising stem gate valve
gate valve တွေကို၊ rising stem gate valve နဲ့ non rising steam gate valve ဆိုပြီး ခွဲခြားကြပါတယ်။ hand wheel ကိုလှည့်တဲ့အခါ၊ valve bonnet ထဲကနေ၊ stem ဟာ အပြင်ဖက်ကို ထွက်လာတာမို့၊ rising stem gate valve ရယ်လို့ခေါါကြပြီး၊ stem ရဲ့ threads တွေဟာ၊ body နဲ့ bonnet ထဲမှာမရှိပဲ အပြင်မှာ ရှိနေကြပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ gate valve တွေဟာ၊ rising stem gate valve တွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
Fig. non rising steam gate valve
non rising steam gate valve မှာတော့၊ stem ရဲ့ threads တွေဟာ၊ body နဲ့ bonnet ထဲမှာပဲရှိနေကြပြီး၊ hand wheel ကိုလှည့်တဲ့အခါ၊ valve bonnet ထဲကနေ၊ အပြင်ဖက်ကို မထွက်လာ ပါဘူး။ valve အတွင်း ဖြတ်သန်း စီးဆင်းသွားတဲ့၊ liquids တွေနဲ့၊ အမြဲထိတွေ့နေရတာမို့၊ valve stem ဟာ၊ corrosion ဖြစ်ဖို့ အခွင့် အလမ်း ပိုများပါတယ်။
Fig. wedge shaped gate
wedge shaped disc သို့မဟုတ် wedge shaped gate တွေကို၊ solid wedge gate, split gate နဲ့ flexible gate ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ temperature ပြောင်းလဲမှုကြောင့် valve body မှ၊ seat ဟာ expansion ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ တိတိကျကျအထိုင်ချထားတဲ့ solid wedge gate နဲ့၊ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်နိုင် တာမို့၊ thermal expansion ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ high temperature fluids တွေအတွက်၊ အသုံးပြုဖို့ မသင့်  ပါဘူး။ high pressure နဲ့ high temperature fluids တွေအတွက်၊ split gate နဲ့ flexible gate wedge တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. valve cavitation
Valve Cavitation ဆိုတာကတော့ flow media ဖြစ်တဲ့ fluid ဟာ၊ valve အတွင်းတိုးဝင်ရောက်လာစဉ် အခိုက်မှာ pressure drop ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါ fluid ဟာ bubbles ဒါမှမဟုတ် flush တွေကို ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ pressure ဟာမူလ အတိုင်း recover ဖြစ်သွားမှသာ၊ bubbles ဒါမှမဟုတ် flush တွေပျောက် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cavitation ကြောင့်ပေါါပေါက်လာရတဲ့ fluid bubbles ဒါမှမဟုတ် flush တွေရဲ့ impact ဟာ valve housing နဲ့ valve ရဲ့ အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေပေါါ အဆက်မပြတ် သက်ရောက်နေသလို၊ အချိန်ကြာ လာတာနဲ့အမျှ pitting တွေ၊ wear down တွေ အချိုင့်တွေ နဲ့ ပွန်းစားမှုတွေဖြစ် စေပါတယ်။
Fig. Pump impeller cavitation
Fig. Propeller blade cavitation
အလားတူ၊ sea water cooling pump တွေ၊ fresh water cooling pump တွေရဲ့ housing မှာ pitting တွေဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံး housing leak ဖြစ်တာတွေ၊ impeller မှာ pitting တွေဖြစ်ပြီး၊ အပေါက်တွေ ဖြစ်လာတာတွေ၊ blade တွေ စားသွားတာတွေကလည်း water cavitation ကြောင့် ပေါါပေါက်လာတာ ဖြစ်ပြီး၊ propeller blade တွေ thin " ပါး " သွားရတာ၊ pitting တွေဖြစ်လာရတာ ကလည်း sea water cavitation ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်အခေါါ မီး စားသွားတယ် ဆိုတဲ့ heat corrosion နဲ့ ရေ စားသွားတယ်ဆိုတဲ့ cavitation ကိုလျှော့ချဖို့ design ပိုင်းအရ modification တွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ potential cavitation conditions ဟာ၊ inlet, outlet နဲ့ fluid မှဖြစ်ပေါါလာတဲ့ application ratio ပေါါမှာမူတည်နေပါတယ်။
Ar = (Pi - Po) / (Pi - Pv)
မှာ Ar ဟာ application ratio ဖြစ်ပြီး၊ Pi က absolute inlet pressure, Po ကတော့ absolute outlet pressure နဲ့ Pv က absolute vapor pressure of the fluid တို့ဖြစ်ပါတယ်။ application ratio ကို၊ incipient cavitation index လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။ application ratios တန်ဘိုးဟာ ( 1 ) ထက်မြင့်ရင် fluid flashes တွေဖြစ်ပေါါတတ်ပြီး၊ ( 1 ) နဲ့နီးကပ်တဲ့အခါ၊ potential cavitation ဖြစ်ပေါါဖို့၊ ပိုမိုနီးစပ် ပါတယ်။ fluid ရဲ့ temperature မြင့်ရင်လည်း cavitation ဖြစ်ပေါါမှုမြင့်တတ်ပါတယ်။
Centrifugal pump ရဲ့ capacity ကို၊ varying speed method နဲ့ constant speed method တွေကို သုံးပြီး၊ regulate လုပ်ပါတယ်။ varying speed method ဆိုတာကတော့ pump ရဲ့ speed ကို အတိုး အလျှော့ လုပ်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hydraulic/ hydrostatic drives, mechanical drives, eddy current drive/clutch နဲ့ variable speed drives နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီး၊ pump ရဲ့ capacity ကို အတိုးအလျှော့ လုပ်ပေးပါတယ်။
Fig . varying speed method
Hydraulic/ hydrostatic drives မှာ၊ hydraulic coupling တွေကိုတတ်ဆင်ပြီး၊ coupling မှ hydraulic oil volume ကို၊ adjust လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ controlled လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ mechanical drives မှာတော့ belts တွေနဲ့ sheave drives တွေကို၊ တတ်ဆင်ပြီး၊ controlled လုပ်ပါတယ်။
Eddy current drive/clutch နည်းလမ်း ကတော့၊ magnetic coupling ကို၊ တတ်ဆင်ပြီး၊ controlled လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ variable speed drives မှာတော့ motor ရဲ့ frequency သို့မဟုတ် voltage ကိုပြောင်းလဲပြီး၊ controlled လုပ်ပါတယ်။
Constant speed method ဆိုတာကတော့ pump ရဲ့ speed ကို၊ အတိုးအလျှော့လုပ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပဲ၊ throttling, flow bypassing, impeller diameter changing နဲ့ impeller modifying နည်းလမ်းတွေကို သုံးပြီး၊ pump ရဲ့ capacity ကို အတိုးအလျှော့ လုပ်ပေးပါတယ်။
Fig. throttling method
throttling ဆိုတာကတော့၊ pump ရဲ့ discharge valve ကိုအနည်းငယ်သာ၊ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် pump ရဲ့ capacity ကို အတိုးအလျှော့ လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ flow bypassing ဆိုတာကတော့၊ discharge line မှ၊ flow ကို၊ suction line သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ impeller diameter changing နဲ့ impeller modifying နည်းလမ်းတွေကတော့၊ pump capacity ကိုအရေးပေါါလျှော့ချဖို့ ယာယီ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Affinity Laws အရ၊ power consumption, head and volume rate ပေါါမူတည်လို့၊ ပြောင်းလဲ တတ်ဆင် မယ့်၊ impeller ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်သလို၊ impeller blade ရဲ့ pitch ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်လည်း၊ modifying လုပ်ကြ ပါတယ်။
Fig. Pump Regulation and Power Consumption
အပေါါပုံလေးမှာ၊ regulate လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ power consumption အချိုးအဆကိုနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Image credit to : http://www.spiraxsarco.com, http://ot-group.help-out.net, http://www.engineeringtoolbox.com, http://www.solutionsbyharper.com, http://www.irrigationcraft.com, http://cavity.ce.utexas.edu, http://www.engineeringtoolbox.com
Posted by ဒူဒူကြီး at 07:59
Anonymous 15 December 2011 at 04:28